crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Ka ganacsiga Dadka “Human Trafficking” | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka August 5, 2015	0 526 Views
Bakistaan—dalka Bakistaan, sida Hindiya, wuxuu qabaa dhibaatooyin badan oo uga yimaada dad-ka-ganacsiga. Dalka gudihiisa ayaa dadka looga ganacsadaa deedna lasoo suldaaraa. Dhibka ugu wayn ee dadka-ganacsiga waxaa weeye in dan-wadaag xoogsato ah mar kaliya xoog lagu jujuubto si loogu limo beeraha ama ay u xoojiyaan howlaha warshadaha iyo qodista macdannada. Tani waxay badi ka dhacdaa gobollada Sindh iyo Punjab. Dhillaysigu sidoo kale waa sabab kale oo kalifaysa dad-ka-ganacsiga. Inkasta oo Bakistaan tahay dowlad Islaami ah, dal ku-dhagan hida-dhaqankiisa, hadana, heerka dhillaysigu aad buu u sarreeyaa.
Hindiya—dad-ka-ganacsigu waa dhib ku weyn dadyowga Hindiya. Inkasta oo ay sharci-darro tahay xeer ahaan, xeerarkan looma dhaqan-galiyo si dhab ah. Si guud mar ah ayaa dad-ka-looga ganacsadaa sida sanduleyn shaqo, dhillaysi qasab ah, kala bixid xubnaha oogada iyo wixii lamid ah. Gabdhaha ayaa lagu dirqiyaa inay noqdaan u-dhasho-ma-dhasho ka dhan ah doonisteeda. Caruurta ayaa lagu qasbaa inay ka shaqeeyan warshadaha. Mararka qaar halis ayaa ku qabsata caruurta ka shaqeynta goobaha dhiillaysan. Waxay tani ugu danbeyn ku biya-shubataa in caruurtani sidii dhib iyo dhangadeyn loo gudo ay dhaawacmaan. Dabadeed xubnahooda ayaa lagu iibsadaa suuqyada. Dowladda Hindiya ayaa isku dayaysa inay xakame bir ah ku giijiso falalkan ka dhanka ah xaqqa caruurta.
Sri lanka—dadka waxaa looga ganacsadaa gudo iyo dibad ujeedo la xiriirta ku xoogsad iyo dhillaysi. Hayeeshe, isla gudaha Sri Lanka, caruurta waxaa looga ganacsadaa inay xooga dalka loo adeegsado. Sri Lanka waxay muddo dheer dagaal kula jirtay fallaago ku kacsan dowladnimadeeda. Xittaa fallaagadu kolkol waxay si qasab ah ku dagaal-galisaa caruurta. Haweenka iyo gabdhaha ayaa looga ganacsadaa gudaha Sri Lanka si loo dhaco dihintooda.
Previous: Hadafka Dowladnimada!!
Next: Ka ganacsiga Dadka “Human Trafficking”
FIFA oo soo dhaweyn fiican u sameynaysa Taageerayaasha Muslimiinta ee Koobka Adduunka 2018.
Humaima Malik oo Xijaabka ku fara-adeygaysa.